Mercedes-Benz V250 2016 (#738412) for sale in Mayangone | CarsDB
Mercedes-Benz V250 2016
Lot Number: #738412
Win Yu Myaing
This car has been inspected by CarsDB.
40%-50% Down payment အရင် ငွေချေ ပြီး ကျန်ငွေကို (၃)နှစ်ထိ အရစ်ကျ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
Mercedes-Benz V-Class တစ်စီးရောင်းဖို့ရှိပါတယ် ၊ Comfort and Luxury ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ MPV ကားကတော့ V250 2016 မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီး 2140 kg သာရှိတဲ့ ၆ ေယာက်စီး ကားအမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် ၊ အင်ဂျင်ပါဝါ 2.0 L7Speed Auto ဖြင့် အဆွဲအရုန်းကောင်းပြီး နယ်ဝေးခရီးအတွက် အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ပါဝင်တဲ့ Equipment များအနေဖြင့်
TEERING WHEEL ADJUSTABLE IN INCLINATION & HEIGHT
ROOF RAILING ANODIZED
LOWER CONTROL PANEL SWITCH POSITION
2-WAY SPEAKER AT FRONT AND REAR
12V SOCKETS FOR SEAT ROWS, REAR RIGHT AND LEFT
ELECTRONIC KEY IN CHROME LOOK
CENTER CONSOLE WITH ROLLER BLIND
LANE KEEPING ASSIST တို့ပါဝင်အပြင် အခြား နည်းပညာမြင့်စနစ်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါက ကားလာရောက်ကြည့်ရှု့ပြီး စျေးစကားပြောနိုင်ရန် အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။
In order to avoid being mistaken for scammers, please mention to Win Yu Myaing that you are enquiring about Mercedes-Benz V250 2016 posted on CarsDB when you are calling.
Last Edited3days